Beesha (Muumin Aadan) Oo 43 Qof Oo Habar-majeerteen Ah Saakay Ku Xasuuqay Magaalada Gaalkayo – Codka Qaranka Tanadland
Beesha (Muumin Aadan) Oo 43 Qof Oo Habar-majeerteen Ah Saakay Ku Xasuuqay Magaalada Gaalkayo
Gunta Habar-majeerteen Oo Baqtigood Dhulka Laga Gurahayo
Halkaan Ka Daawada Oo Ku Raaxaysta Sida Gunta Habar-majeerteen Hilibkooda Loo Waray.
Maantay waxaa xaafada garsoor ee magaalada Gaalkacyo ka dhacay xasuuqii ugu xumaa ee lagu xasuuqo gunta Habar-majeerteen, tan iyo intii ka danbeysey dagaalkii labada maalmood. Dhimashada maxaysatada Habar-majeerteen ee saakay lagu shirqoolay xaafadda Garsoor waxay maraysaa 43 qofood. Dhaawaca gunta Habar-majeerteen ee la curyaamiyeyna waxay gaartey 70 ruux.
Sidaad ogsoontihiin indhawaale beelweynta (Muumin Aadan) ficilo rag ayey foolanayeen. Dhowaan sidaad ogsoontihiin waxaa jirtey in labo nin oo beesha (Muumin Aadan) ah beesha Habar majeerteen inay afduubtay walina ay maxbuus ahaan u haysato. Labada nin oo ay beesha Habar-majeerteen afduubka u haysato ayaa waxaa laga afduubay gobalka mudug. Waxaana loola cararay magaalada Bosaso oo hada afduub loogu haystaa. Beesha Habar-majeerteen ayaa waxay ku andacootey in nimanka beesha (Muumin Aadan) ee ay afduubeen ay yihiin madaxda ururka Al-shabaab uga wakiilka ah gobolka Mudug.
Sidoo kale sidaad la socotaan dhowaan waxaa magaalada Garoowe gaarey wafti balaaran oo 120 qofood ah. Oo isugu jira isimo iyo siyaasiyiin uuna hogaaminaayo (Ugaas Maxamuud Ugaas Axmed). Arimaha ugu muhiimsan ee ay ergadaasi u aadey magaalada Garoowe waxay ahayd in lagu baajiyo talaabo aargudasho ah oo ay qaado beesha (Muumin Aadan). Ergada beelaha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed magaalada Garoowe waxay kula kulmeen horjoogaha beesha Habar-majeerteen. Waxayna ka dalbadeen in si sharuud la’aan ah si dhaqso ah loogu soo daayo labada nin ee ay beesha Habar-majeerteen afduubka u haysato.
Hadaba walow beesha Habar-majeerteen ay balanqaaday in labada nin ee lagaga afduubtay si dhaqso ah loogu soo deynahayo, hadana waxaa cadaatay in isimada reer Tanadland la war-wareejiyey. Oo uu ku yiri horjoogaha beesha Habar-majeerteen agoon (C/weli) “itoobiya ayaa si dhaqso ah iigu yeertay oo aan u tagayaa ee Garoowe igu suga, 4 maalmood ayaan itoobiya ku maqnaanayaa marka aan soo laabtana labada nin waanu idiin sii daynaynaa xaalna waanu ka bixinaynaa arintaas ee noo dulqaata”.
Sidaad kaloo la socotaan waxaa dhowaan la afduubay weriye (Yacquub Maxamed Cabdulle) oo ka soo jeeda beesha (Muumin Aadan). Walow maalmo markii ay beesha Habar-majeerteen afduub ugu haysteen xaafadda mahbarka ee magaalada Garoowe ay dabeed sii daayeen.
Qaabkii Gunta Habar-majeerteen Loogu Xasuuqay Xerada Dayax:
Dad badan oo reer Tanadland ah oo 15 kii sanaddood ee ugu danbeysey aan magaalada Gaalkacyo tegin, ama aan xog’ogaal u ahayn isbedalada magaalada Gaalkacyo ka dhacay. Ayaa waxaa laga yaabaa inay la fajacaan oo ay u qaadanwaayaan marka ay maqlaan 43 qofood oo Habar-majeerteen ah ayaa lagu xasuuqay xeradda (Dayax). Oo waxay u badantahay in ay isyiraahdaan “War mahbarka lagu laayey xerada Dayax ma niman duulaan ah oo xerada soo weeraray bay ahaayeen?, Maxaa niman mahbar ah xerada Dayax keenay sow rag malaha?”. Sababta oo ay tahay xerada Dayax waxay ku taalaa xaafadda Garsoor, waxaana iska leh beelaha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed. Marka sidee ayey ku dhacday labadii qarax ee lagu weeraray xeradda dayax oo ganacsiyada ku yaala oo dhan ay 100% leeyihiin ganacsatada beesha reer (Ugaas Cismaan) inay ku hoobtaan Habar-majeerteen.
Xaqiiqduna waxa weeye xerada Dayax lama weerarin lamana weerarikaro ee waxaa la weeraray dhisme ku yaala xerada oo ay niman calooshooda u shaqaysteyaal ahi ay keeneen rak tolkood dakane galay oo cadow ah. Magaalada Gaalkacyo suuqa ugu weyn ee wax lagu kala gato waa suuqa weyn ee xaafada Garsoor ku yaala. Suuqa labaad ee ugu weyn oo magaalada Gaalkacyo ku yaalaana wuxuu noqday suuqyaraha xaafadda garsoor ee ku yaala xerada Dayax. Sababtuna waxa weeye suuqii weynaa ee magaalada Gaalkacyo beesha Habar-majeerteen 15 kii sano ee ugu danbeeyey waa’ay ka go’een inay ka soo adeegtaan. Marka beelaha reer (Ugaas Cismaan) si ay agoonta suuqa weyn ka baqday ay lacagta uga qaataan waxay suuq ka dhigeen xeradii Dayax. Halkaas oo ay u camireen oo ay suuq weyn oo wax kasta laga helo ay ka dhiseen. Taasi waxay suuragelisey in Suuqyaraha xaafadda garsoor ee xerada Dayax ku dhex yaala uu noqdo suuqa keliya ee ay ka adeegtaan beesha Habar-majeerteen. Arintaasi waxay kaloo sabtay dhawr jeer oo hore oo beesha (Muumin Aadan) ay rag Habar-majeerteen ah suuqa Dayax ay ku laysay. In todobaad dhan aan galbeedka xaafadda Israac dadka degani ay la’aayeen meel ay ka adeegtaan. Maadaama galbeedka xaafadda Israac uusan suuq ku oolin.
Sanadkaan aynu ku jiro ee 2016 bilowgiisii xeradda Dayax waxaa laga dhisay dhismeyaal cusub oo badan. Galbeedka magaalada Gaalkacyo xaafadaha ku yaala raga canshuuraha ka qaada, waxaa madax u ahaanjirey kuligood niman caadoqaateyaal ah oo ka soo jeeda beelaha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed. Nin beesha reer (Fiqi-ismaaciil) ah iyo 4 dhabcaal oo beesha (Muumin Aadan) ah. Arinta ugu layaabka badan oo nimankaas damiirlaaweyaasha ahi ay ku kaceen waxaa ka mid ah, inay niman Habar-majeerteen ah oo xayn ah ay keeneen suuqa dayax. Iyaga oo ku andacoonaya in lacagta mahbarka looga qaado suuqa Dayax in xaafadda Garsoor lagu horumarinayo.
Shacabka beesha (Muumin Aadan) saakay waxaa ka degey kayligii saaraa ayaamahaan, kedib markii ay u geysteen gunta Habar-majeerteen xasuuqii ugu xumaa tan iyo dagaalkii labada maalmood. Hada geerida gunta Habar-majeerteen ee hilibkooda haada loowaray waxay maraysaa 43 qofood. Waxaana la filayaa geerida gunta Habar-majeerteen inay maalmaha soo socda ay kor u dhaafto 60 qofood. Maadaama 70 ka qofood oo laga dhaawacay gunta Habar-majeerteen intooda badani ay yihiin dad nafkadhawr ah, oo ay xaaladdoodu tahay “Weli naftu ma ku jirtaa mise waa’ay ka haadey?”.
Laakiin saas oo ay tahay dad badani waxay aaminsanyihiin shirqoolkii loodhigay in agoonta gunta Habar-majeerteen lagu halaago uu fashilmay, oo uusan u meelmarin sidii lafilayey. Beesha (Muumin Aadan) waxay fileysey marka ay ugu yaraato inay ku xasuuqdo xeradda Dayax 300 oo nin oo Habarmajeerteen ah. Laakiin waxaad moodaa in shirqool kaasi uu beesha (Muumin Aadan) ka fashilmay.
Sababta oo ay tahay saakay beesha (Muumin Aadan) waxay ku casuntey xerada Dayax rag 200 oo nin ah oo beesha Habar-majeerteen ah. Saakay waxaa kaloo la filayey sidii ay balantu ahayd in ay xerada Dayax yimaadaan 200 oo nin oo beesha Habar- majeerteen ah. Niman kaas oo ay beesha (Muumin Aadan) kula balantay inay halkaas kula shirto. Waase ay ku dhiciwaayeen inay yimaadaan xerada Dayax iyadoo labo nin oo halyeeyada beesha (Muumin Aadan) ah afduub loo haysto. Sida la sheegay nimanka 200 oo nin ah oo beesha Habar-majeerteen ahi markii ay ka baqeen inay yimaadaan shirkii ay balan qaadeen inay imaanayaan, waxay codsadeen in shirka dib loogu dhigo mudo todobaad ah. Arintaas waxay ula jeedeen labada nin ee beesha (Muumin Aadan) ee ay afduubka u haystaan, marka aanu idiin soo deyno ayaanu iskukiin soo aamineynaa. Oo xerada Dayax aanu idiinku imaanaynaa
Qorshuhuna wuxuu ahaa in qof reer Tanadland ahi uusan imaan suuqa Dayax maantay oo ay ka adeegtaan suuqa weyn oo keliya. Beesha (Muumin Aad) na maadaama aysan suurtagal ahayn inay waxyeelo u geystaan suuqooda, duulaanka hore waxaa lagu qaaday oo keliya halkii guri ee ay ku sugnaayeen cayayaanka Habar-majeerteen. Sidii uu qorshuhu ahaa ayuuna hawlgal kaasi u fuley oo nimankii mahbarka ahaa ee qolada canshuuraha ugu jirey beesha Habar-majeerteen kuligood waa la xasuuqay.
Saakay beesha Habar-majeerteen waxaa lagu qaaday labo weerar oo isxiga. Weerarkii hore ee u geystey mujaahidka beesha (Muumin Aadan) ah, wuxuu ahaa qaraxii ugu xooga badnaa ee ka dhaca geyiga Tanadland iyo soomaaliya inteeda kale. Cadadka miisaanka iyo rasaasta taangiga miinada layskulaxiray oo gaariga saaran darteed. Weli horay looma arag guryo cusub oo shub ah oo birihii shubka ku hoosjirey, inta qarax lagu kala firdhiyey samada loo tuuray oo birba jiho loo tuuray. Dadkii daartaas ku jireyna lafahoodiina la waayey oo ay shiidmeen. Balse qaraxii ugu waxyeelada badnaa wuxuu ahaa qarixii danbe oo loogu talogalay in lagu gumaado gunta Habar-majeerteen marka ay maqlaan in xaafadda Garsoor lagu xasuuqay maxaysatadoodii, oo ay galbeedka xaafadda Israac ka soo gurmadaan iyaga oo is leh meydka iyo dhaawaca aad soo qaadataan.
Beesha (Muumin Aadan) gaashaanqaadkoodu maaha rag dakanahooda laga filankaro inay waan-waan ku raadiyaan, waana niman dhiig kulul oo ciday u gacanqaadaan weligoodba aaqiro u dira. Saakay beesha (Muumin Aadan) markii ay ogaatey inay ka baqeen inay u yimaadaan nimankii ay casumeen. Waxay go’aansadeen inay beesha Habar-majeerteen ay u dhigaan labo shirqool oo deg-deg ah. Waxaana suuqa xerada Dayax ay ku xasuuqeen in badan oo ka mida cayayaankii Habar-majeerteen ee diciifka ahaa. Sidaan horay idiinkugu sheegay nimankaan xaynta ah ee Habar-majeerteen waxaa xeradda Dayax keenay, niman caaleyaal ah oo beesha (MA) ah dadkuna ay u yaqaaniin midiidinka mahbarka.
Nimanka xafiiska canshuuraha saakay lagu xasuuqay ayaa waxay isugujireen niman canshuuraha qaada iyo niman ilaalo u ah. Maadaama beesha Habar-majeerteen dhawr jeer oo hore suuqa Dayax rag badan looga laayey. Haseyeeshee nasiib wanaag weerarkii hore waxaa lagu xasuuqay dhamaan nimankii xafiiska canshuuraha u joogey beesha Habar-majeerteen. Iyo weliba ilaaladoodii oo waxaa dhegta dhiiga loo daray 14 nin oo isugu jira jifooyinka (Reer Mahad) iyo (Reer Biciidyahan).
Weerarkii hore jifada (Reer Biciidyahan) oo aan degaan ku lahayn gobalka mudug waxaa looga diley 7 nin oo hubaysan, raga laga laayey jifada (Reer Mahad) na waxay ahaayeen qacdii hore 5 nin. Arintaas oo ah wax aad loola yaabo, sababtuna waxa weeye tan iyo waagii ay jifooyinka (Cumar Maxamuud) iyo (Cismaan Maxamuud) ay dirireen. (C/laahi Yuusuf) ayaa wuxuu sookireystey reer miyiga jifada (Reer Biciidyahan) oo ku dagaal galay. Marka cayayaanka (Reer Biciidyahan) walow aysan gobalka mudug degin hadana waa cayayaanka cayayaanka ugu liita, oo weli qolada xaafadda galbeedka israac dega ayaa xabadda isaga dhiga. Xataa waxaa jirtey in jifooyin dhawr ah oo ah jifada cumar-hoogahaye ay rag xayn ah magaalada Gaalkacyo uga laayeen. Sababtuna waxa weeye waxay u arkaan dad cawaan ah oo si sahlan loo adeegsankaro. Waxaana adeegsada oo ay waardiyeyaal u yihiin jifada aadka ugu hoobatay xasuuqa joogtada ah ee gobalka mudug ka socda ee (Reer Mahad).
Inta la hubo gaarigii labaad oo u wadey mujaahid u dhashay beesha (Muumin Aadan) waxaa lagu xasuuqay 29 qofood oo gunta Habar-majeerteen ah. Oo dhamaantood u yimid xaafadda Garsoor inay qaataan meydka iyo dhaawaca Daadsan suuqa xerada Dayax. Waxaa kaloo jira dad tobaneeyo ah oo raqdooda iyo ruuxooda la waayey oo intuu gurigu ku gubtey danbaska noqday oo gubtey. Gunta Habar-majeerteen waa reer weligood la gumaadijirey oo aan laga yaabin inay wax talaabo ah ay qaadaan. Aana looga baran dhiiranaan ay rag ku abaaraan, waxayse caan ku yihiin oo ay ku fiicanyihiin xabaalo qufida, aasida iyo catowga oo aysan ka daalin. Si kale hadaan u dhigana, weerarkii maanta lagu gumaaday gunta Habar-majeerteen beesha iyo raga qaaday marna qasadkoodu muusan ahayn inay isqariyaan. Hayeeshee beesha maantay rageeda magaalada Gaalkacyo lagu xasuuqay waa ay xasuusantahay, iyaga oo 20 sanadood marka aanu rag ka layno yiraahda “Baraxley bay ka yimaadeen raga raga naga laayey iyo Al-shabaab baa na laayey, Maalintii ay wax isbideen oo ay inta Garoowe ku shireen ay yiraahdeen beesha Al-shabaab ka ah oo xasuuqa nagu haysa waa beesha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed. Dabcan maalintaasna
Habar-majeerteen xiniinyo ay rag isaga dhiciyaan kuma aysan tashanayne, ee Waxay isku halaynayeen oo ay islahaayeen Dhulbahante ayaa wax’idin taridoona.
Arinta ugu qosolka badan ee ayaamahaan reer mudugu ay ku maadsadaan waxa weeye. In beesha Habar-majeerteen markii ay xasuuqii joogtada ahaa ee mudada dheer laguhayey ay xamiliwaayeen, inay ka baryeen beesha Hawiye inay keenaan magaalada Gaalkacyo ciidan amaanka magaalada ilaaliya. Dabadeedna beesha Hawiye ay codsigaas ka aqbashay oo ay magaalada Gaalkacyo u soo direen ciidan dhamaantood ka kooban beesha (Habargidir). Ciidan kaas oo weliba u badan beesha aynu xulufada nahay ee (Sacad). Hubkii ay wateena ay hada qayb muhiim ah oo ka mid ah ay ka iibiyeen beelaha (Sacad) iyo (Muumin Aadan) oo dagaal kula jira gunta Habar-majeerteen iyo midiidinkooda. Arintaasi waxay muujinaysaa heerka ay gaarsiisantahay naflacaarinimada gunta Habare-majeerteen iyo qar-iskatuurnimadooda.
Hubka ay ciidamada beesha (Habar-Gidir) ay soo geliyeen gobalka Mudug beesha (Sacad) si ay ula wareegto, beesha (Sacad) waxay beesha Habar-majeerteen ay uga fureen dhanka Jiriiban furin. Bishaan aynu ku jirona waxay ciidamada beesha (Sacad) ay rag xayn ah ay labo goor ka laayeen mahbarka. Labada jeerna waxaa magaalada Gaalkacyo la keenay dhaawaca gunta Habar-majeerteen. Labada jeerna ciidamada beesha (Sacad) oo duulaanka qaaday oo Habar-majeerteena raga ka laayey, iyadoo aysan xagatini ka soo gaarin hawlgalkaas ciidan oo ay fuliyeen ayey dib ugu laabteen halkii ay ka soo duuleen.
Beelweynta (Muumin Aadan) waxaa u qorshaysan hadaan labada nin ee afduubka ay u haysato beesha Habar-majeerteen aan sida ay balanqaadeen aan la soodeyn, in kumanaan gunta habar-majeerteen ahi ay dartood u god galaan. Cawaaqibxumo aysan weligood ka soo kabanna ay la kulmaan gunta taagta daran ee Habar-majeerteen. Anagu marna ma’anaan oran al-shabaab maanu nihin, mana aanu orandoono sababta oo ay tahay qabka nagujira ayaan noo ogolayn. Dooda labada nin ee beesha (Muumin Aadan) oo ay beesha Habarmajeerteen Afduubatayna marna noqonmayso Al-shabaab may’ay yihiin iyo ma aha. Ee hadalka nuxurkiisu waxa weeye beesha Habar-majeerteen ma’ay ku dhacdaa inay niman beesha (Muumin Aadan) ah ay afduub u haysato?. Cawaaqibxumada arintaas ka dhalatana ma’ay yihiin rag ka ficiltamikara oo ku dhaca inay gacanta fidiyaan, Sida gumaadka maantay ragooda loogu geystey xaafadda Garsoor oo kale.
Mise gunta Habarmajeerteen intay maxaysatadooda aastaan bay rabaan inay faankoodii qiyaaliga ahaa oo ay isku maaweelinjireen inay halkiisii ka sii wataan, Oo ay yiraahdaan magaalo ay cayayaan ka yihiin anagaa ka talina, gudoomiye hebel iyo taliye hebel baa saas yiri. Agoonta Habar-majeertee faankoodu wuxuu gaarey ayaamahaan heer ay soo celiyaan hadalo qiyaali ah oo ay isku maaweelinjireen. Waagii uu ku socdey xasuuqa joogtada ah ee ugu darani. Iyaga oo oranjirey magaalada ciidamadayada ayaa hawlgal baaritaan ka sameeyey mar sidii galbeedka xaafadda Israac loogu laynayey ay ka qaxeen, Oo labada suuq ee magaalada Gaalkacyo ku yaala ay ka go’een xataa dumarkoodu inay yimaadaan. Bal iska daah rag mahbar ah oo xaafadaha kale iyo suuqyada magaalada yimaada’e.
“Gunta Habar-majeerteen Mindhaa Gawda Kama Deyno!!”
Wallee Iyo Bile Jeer Majeerteen Sidaanu Weligayo U Cayrsanjirey Aanu U Cayrsano, Oo Saqiirkooda Ugu Danbeeya Aanu Faas Surka Uga Goyno, Mooyaane Inaysan Wax Kale Noo Ekayn!!